Warar dheraad oo laga helayo Qarax xoogan oo ka dhacay Muqdisho
By Caalamka On Sep 18, 2019 Last updated Sep 18, 2019
qarax maqayadd muqdisho
Warar dheeraad ah, ayaa ka soo baxaya qarax xooggan oo goordhow ka dhacay wadada Maka Al-Mukarama. Kaasoo jugtiiisa laga maqlay qeybo kamid ah Magaalada Muqdisho.
Qaraxa ayaa ka dhacay afaafka hore ee Maqaaxi cusub oo caawa uun xarriga laga jarayay furitaankeeda. Waxaana xiliga qaraxa uu dhacayay gudaha Maqaaxida ku sugnaa dad u badan dhalinyaro oo lagu casuumay munaasabada.
Qof kamid ah dadkii ku sugnaa, halka qaraxa uu ka dhacay oo weerarka ka badbaaday ayaa Warbaahinta u sheegay, Inuu arkay dhimashada hal askari iyo dhaawaca 4 qof oo kale. Kuwaasoo isugu jiray dadkii munaasbaada lagu casuumay iyo kuwo wadada marayay.
Maqaaxida qaraxa uu ka dhacay waxa ay ku taalaa aagga isgoyska Shaqaalaha. Waxaana halkaasi buux dhaafiyay Ciidamo ka tirsan Booliska Saldhigyada Waaberi iyo Hodan oo howlgallo baaritaana ah sameynaya.
Goorta uu soo baxayo go’aanka deyn cafinta Soomaaliya oo la…
FBI-da oo shaacisay cidda amartay shirqoolka lagu dilay…
Warar is khilaafsan, ayaa ka soo baxaya nooca qaraxa. Wararka qaar waxa ay sheegayaan inuu qarxay gaari qarax qof loogu xiray, halka warar kalena ay sheegayaan inuu ahaa mid lagu soo raray walxaha qarxa.
Waxaa jiray Mootooyin badan oo Bajaaj ah, kuwaasoo lagu arkayay iyagoo gubanaya, maadaama ay saameeyeen qaraxa goobta ka dhacay.
Maleyshiyaadka gacansaarka la leh shabakadda Al-Qaacida. Ayaa aalaaba looga bartay weerarada ka dhaca magaala madaxda Soomaaliya gaar ahaan wadada Maka Al Mukarama oo isgoyskan uu ku yaalo.
AlShabaab oo laga saarey Muqdisho sanadkii 2011-kii, Ayaa tan iyo waqtigaasi waxa ay ka fulisaa magaaladda howlgalo isugu jira dilal qorsheysan iyo qaraxyo ay wehliyaan weeraro toos ah.
Goobta uu ka dhacay qaraxa ee Xaaji Baasto, Ayaa xiliyadda fiidkii ah mid mashquul badan. Waxaana ku yaala mehrado ganacsi iyo maqaaxiyo ay ku shaaxeeyaan dadyow kala duwan.
Caalamka6327 posts 0 comments
India’s Modi postpones Turkey visit over Erdoğan’s…
20 mins ago 321,403 0
How Putin used Turkey’s Kurdish phobia to win in Syria
28 mins ago 125,403 0
Mogadishu oo AMISOM ku beddeleysa kuwo ka socda Ankara iyo…
55 mins ago 23,614 0
Xildh.Shire: “Mursal Baarlamaanku wuxuu ka dhigay midkii…
1 hour ago 14,716 0
Prev Next 1 of 3,900
Ujeedka safarka ra’iisul wasaare Abiy Axmed Cali…
1 hour ago 325,406
Kalfadhigii Ugu Horeeyay Ee Baarlamaanka…
12 hours ago 321,425
Golaha Shacabka oo soo saarey…
12 hours ago 321,430
Isbedel lagu sameynayo hanaanka…
13 hours ago 32,116
Prev Next 1 of 3,899
©2019 - All Rights Reserved. Axadle | is a leading somali news website which has its HQ in Mogadishu
Website Design: Axadle Media GroupSaldhigga Suxufinimadda waa kalsooni iyo dhexdhexaadnimo.Axadle Media Group waa ka madaxbannaan yahay siyaasad, diinta, dhaqaalaha, bulshadda iyo danaha gaarka ah.